‘Uma Baahnin Wax Ka Bedel Ee Sixid Khaladaad Baan U Baahanahay’ – Del Bosque
HomeWararka Maanta‘Uma Baahnin Wax Ka Bedel Ee Sixid Khaladaad Baan U Baahanahay’ – Del Bosque
Tababaraha xulka qaranka Spain Vicente Del Bosque ayaa ku adkaystay inaanu wax is bedel ah oo xaga ciyaaryahanada ah samayn doonin , wallow kooxda dhabar jab weyn iyo ceebi ka soo gaadhay xasuuqii 5-1 ee xulka Netherland ay kala kulmeen , kulankoodii furitaanka koobka aduunka ee xallay Jimcihii.
Xulka lagu naanayso La Roja ayaa koobka aduunka iska soo xaadiriyey, iyagoo wata koobkii kan ka horeeyey, laba jeer oo horyaalka qaramada qaarada Yurub ah – laakiin waxaas oo dhan waxaa waxba kama jiraan ka dhigay xidigaha Holland oo ay ugu horeeyaan Robin van Persie iyo Arjen Robben.
Van Persie iyo Robben ayaa mid kastaa laba gool ka dhaliyey, kuwaas oo siweyn uga faa’iidaystay khaladaadkii goolwadaha khabiirka ah ee Iker Casillas iyo difaaca Gerard Pique ay sameeyeen.
Haddii sidaasi dhacday waxaa laga eegayay tababare Del Bosque inuu dib u shaandhayn ku sameeyo xulkiisa koowaad, laakiin tababarahan hore ee kooxda Real Madrid wuxuu diiday inuu gilgilo xidigihii xawaaraha ku soo waday shaqadiisa sanadihii u dambeeyey kulamada ku soo foolka leh ee Group ka B oo kala ah Chile iyo Australia.
Wuxuu ku yidhi Telefishanka SporTV: “Waxba ugama baahnin kacaan inaan samayno. Maanaan guulaysan laakiin waanu sii socon karnaa oo guusha gaadhi karnaa ciyaarta noo xigta.
“Tani waxay noo noqonaysaa baraarujin. Waa inaanu isku daynaa inaanu dhamaan saxno khaladaadkii dhacay, Ka badinaa Chile, oo aanu halkaas ka sii wadnaa markaa kadib.”
Ciyaarta ayaa u muuqatay mid ay ku gacan sarayso Spain kadib goolkii rigoodhaha ahaa ee uu Xabi Alonso u dhaliyey daqiiqadii 27 aad ee ciyaarta.
David Silva ayaa isna ku sigtay inuu ciyaarta ka dhigo 2-0 laakiin wax yar kadib Netherland ayaa barbar dhac la timid kadib gool aad u qurux badan oo uu madaxa ugu dhaliyey Van Persie.”
Qaybtii dambe ee ciyaarta waxaa la wareegtay Holland, waxaana sida daadka ugu fatahay Robben, Stefan De Vrij, Van Persie iyo mar kale oo Robben uu ku soo khatimay mid kamid ah natiijaddii ugu yaabka badnayd taariikhda koobka aduunka.
Del Bosque oo hadalka sii wataa wuxuu yidhi: “Waa ciyaar, waa inaanu guuldarada aqbalnaa. Iyagaa gacan sareeyey qaybtii dambe. Haddii Silva ciyaarta ka dhigi lahaa 2-0… laakiin wey na hor istaageen.
“Qaybtii dambe waxay abuureen fursado badan, waxay heleen fakaag badan, waxaanu ahayn kuwo aad uga dhutinaya dhinaca difaaca.
“Khaladaad badan ayaa jiray, laakiin waxaanu u dagaalami doonaa natiijo fiican. Maskaxiyan ayaanu hoos ugu dhacnay, laakiin may ahayn jismiyan meeshaanu ka liidanay.”